Al Shabaab: 60 Askari Ayaan Ku Dilnay Dagaalkii Moqokori Keydad Hub ahna Waa Ku Qaniimeysannay.
Friday June 01, 2018 - 22:40:00 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya.
Dagaalka oo ahaa mid socday ku dhawaad hal saac ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerar ballaaran ku qaadeen saldhigyada Maleeshiyaadka DF-ka.
Khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dagaalka ayaa ah mid aad u farabadan, war rasmi ah oo kasoo baxay Taliska ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyay in dhimashada ciidamada Dowladda Federaalka ay gaartay 60 askari.
"Khasaaraha murtadiinta kasoo gaaray dagaalkii Moqokori waa 60 dhimasho ah,mujaahidiintu waxay gacanta ku hayaan Meydadka 47 askari halka meydad kale ay daadsanyihiin dhulka howdka ah walina firxadka cadowga ayaa lagu daba jiraa"ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo ku dhaawacmay dagaalka ay ku dhinteen banaanka magaalada halka Meydadka qaar ay daadsanyihiin goobta dagaalka marka lagasoo tago meydad ay ciidamada Al Shabaab gaadiid ku daabuleen.
illaa sedax gaari oo mid kamida yahay nuuca ciidamada xambaara ayay gacanta ku dhigeen ciidamada Al Shabaab sida ay xaqiijinayaan warar lagu kalsoonyahay.
Ciidamada Al Shabaab waxay rarteen saanado melleteri iyo dhammaan saadkii ciidan ee yiillay Moqokori, Jabaqda rasaas ayaa gabaldhicii caawa laga maqlayay dhulka Howdka ah ee kala qeybiya Maxaas iyo Moqokori waxayna dadku sheegayaan in ay israsaaseeyeen ciidamo habqan ah oo dhanka Maxaas ubaxay iyo kuwa kale oo eryanaya.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee ku sugan degmada Maxaas ayaa diiday in ay wax gurmad ah ufidiyaan Maleeshiyaadka DF-ka ee saaxiibadooda ah xilligii uu dagaalku socday balse caawa Maqribkii ayey usoo dhaqaaqeen dhanka Moqokori si ay wadada uga hor tagaan maleeshiyaadkii dhankooda usoo jabay.
Ilo xog ogaal ah oo ay heshay SomaliMeMo ayaa tibaaxaya in hubkii ugu badnaa ay 'Mujaahidiintu' ku qabsadeen dagaalkii maanta waxaana hubka laqabsaday kamid ah Tobaneeyo kamid ah qoryaha PKM-ka iyo Bakhaaro rasaas ah iyo sidoo kale qoryaha AK47-ka loo yaqaan.
Waa Khasaarihii ugu xooganaa oo lagaarsiiyo maleeshiyaadka Xabashida Itoobiya soo abaabushay ee ka dagaallama gobolka Hiiraan tan iyo markii uu Max'med Farmaajo noqday madaxweynaha dowladda Federaalka.
Xoogag Hubeysan oo Askari ku dilay degmada Kaaraan hubkii uu watayna ka furtay.
Askari Katirsan Ciidamada Dowladda Oo lagu dilay degmada Waaberi.
Al Shabaab oo 6 Askari Itoobiyaan ah ku dishay qarax ka dhacay Gobolka Baay.